XOG DEG DEG AH: DF Soomaaliya Oo Kumanaan ciidan ah kacodsatay RW Itoobiya, maxayse uga jawaabtay Addis Ababa?
ADDIS ABABA(P-TIMES) – Warar laga helay ilo katirsan kusugan magaalada Addis Ababa iyo Xaafiisyada Urur Gobaleedka IGAD ayaa daaha ka rogaya in Madaxda dawladda Faderaalka ee Soomaaliya ay codsadeen in ciidamo gaaraya 10Kun Askari oo kamid ah kuwa Itoobiya la geeyo gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaana gobalka Gedo oo ay u taageeraan howlgalada dawladda Faderaalka.
Warsidaha Puntlandtimes oo xogtan helay waxay iluhu u xaqiijiyeen in qorshahan oo horey u ahaa mid-bilow ah hadda uu marayo dhamaad, ayna aqbashay Xukuumadda Addis Ababa in kumanaan Askari ay u dirto Soomaaliya.
Itoobiya ayaa ciidamadeedu hadda yihiin ciidanka 2aad ee ugu badan howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM, waxayna joogaan maamulada Koonfur Galbeed, Hirshabeelle & Jubbaland oo sadex qeybood oo muhiim ah.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa horey u codsaday in ciidamo katirsan Itoobiya iyo Eritrea ay qeyb ka noqdaan qorshaha cusub ee Soomaaliya, waxaana dawladdiisu ay xooga saaraysaa sidii ay ciidamadaas u qaban lahaayeen magaalada Bu`aale ee gobalka Jubbada Dhexe.
Dawladda Faderaalka ayaa u aragta qorshahan mid ay uga faa’iideysan karto in ay kuqabsato magaalada Bu`aale, si uu meelmar u noqdo qorshaheeda ku wajahan dhismaha Jubbaland iyada daabacsan ka hor bisha April ee sannadka nagu soo aadan.
Ilo wareedyadu waxay xaqiijiyeen in ay Xukuumadda Soomaaliya bixin doonto dhaqaalaha badan ee kubaxaya ciidamadan soo galidooda Soomaaliya, sidaas oo kalena ay adeegsanayaan magaca iyo calaamada Midowga Afrika ee AMISOM, laakiin caqabadaha hareyn doona waxaa kamid noqon doona cida bixin doonta dhaqaalaha faraha badan ee ay u baahan yihiin.
Itoobiya ayaa horey ciidamadeeda ugala baxday Soomaaliya, markii ay dagaalo culus kala kulantay kooxo kasoo horjeeday, waxaana ay uga baxday markii dambe heshiis ay galeen dawladda Soomaaliya iyo Itoobiya, gaar ahaana garabkii uu hogaaminayey Shariif Sheekh Axmed.
Haddii markale ay Itoobiya gasho gudaha Soomaaliya dad badan ayaa u arka mid dib loogu abuurayo xiisado coladeed oo kuwajahan gdaha Soomaalida iyo in ay kooxaha Argagixisadu helaan garab iyo gaashaan aysan maanta haysan.
Farmaajo khiyaano qaran ayuu galay. In sababo siyaasadeed, uu ciidama shisheey u adeegsado shicibkiisa, waa dambi qaran oo aad u culus. Waa sababta XISBIGA XORNIMADA PUNTLAND loo aasaasay, si loo samatabixiyo puntland iyo shicibkeeda . Ciidankaan shisheeye kuma ekaanayaan Gedo Ee Garoowe ayey akhiritaanka soo cagadhigan. Intaay gooru-goor tahay taageer oo ku biir XISBIGA XORNIMADA PUNTLAND si aad dalkaaga iyo dadkaaga u samatabixisid